कांग्रेसका नयाँं सबै एमालेमा, पुराना राप्रपामा - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
कांग्रेसका नयाँं सबै एमालेमा, पुराना राप्रपामा
कांग्रेसका कारण ४० लाख युवा खाडीमा
अहिले स्थानीय चुनावको चर्चासँगै नेकपा एमाले र राप्रपाबीचको तालमेलका विषयमा निकै चर्चा सुनिन्छ । एमालेले तालमेल किन गर्र्यो ? त्यसमा व्यक्तिगत रुपमा पार्टीभित्र पनि फरक–फरक मत हुन सक्लान । तर, यो एउटा आन्दोलन हो । एउटा मुद्दा हो । एमालेले अहिले दुईवटा हिसावले चुनावी तालमेल गरिरहेको छ । चुनावी तालमेलका क्रममा एमालेले सत्रु पहिचान गरेको छैन एमालेको कोही पनि सत्रु छैन । तर प्रतिस्पर्धी भने एमालेको पक्कै पनि हुन्छ । एमालेको मुख्य प्रतिस्पर्धी अहिले नोपाली कांग्रेस हो । एमालेलाई रोक्नका निम्ति अहिले चौतर्फी मोर्चाबन्दी भइरहेको छ । त्यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ । एमालेले एजेण्डा र सवाल मिल्ने शक्तिसँग तालमेल गरेर त्यो चौतर्फी आक्रमण रोक्न सबै प्रयास गरिरहेको छ । एमालेको तालमेल त्यो चौतर्फी आक्रमण हो ।
भारतसँग एमाले प्रष्ट माओवादी कांग्रेस मौन
राप्रपासँग किन गरेको भन्ने विषयमा कुनै अनौठो मान्नु जरुरी छैन । सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा को गएन ? लोकेन्द्रबहादुर चन्दसँग सहकार्य कसले गरेन ? हिजो सिन्धुपाल्चोकमा कमलथापासँग कसले सहकार्य गरेको हो ? आफु लसपस गर्ने अनि अहिलदे एमालेको तालमेलका विषयमा प्रश्न उठाउने ? कुनैपनि पार्टी कुनै बेला सकारात्मक भूमिका खेलेको हुन्छ कुनै बेला नकारात्मक भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । सकारात्मक कुरा मात्रै गरियो भने त्यो सही दृष्टिकोण हुँदैन र नकारात्मक दृष्किोण राखेर मात्रै पनि हुँदैन । २०६२ ०६३ को आन्दोनलनमा नेपाली कांग्रेसले सकारात्मक भूमिका खेलेकै हो ।
आज ४० लाख युवाहरु विदेशमा छन् । ती मध्ये २५ लाख युवाहरु कांग्रेसका कारण विदेशमा छन् । जनकपुर काराखाना कसले बन्द गर्यो ? बाँसाबारी छाला जुत्ता, चिनी कारखाना, जुटमिल कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग, हेटौडा धागो उद्योग लगायतका दर्जनौ उद्योग धन्दा कसले सिध्यायो ? हरेक कारखानामा एक हजार प्रत्यक्ष र एकलाख भन्दा बढी अप्रत्यक्ष रोजगारी थियो ।
कांग्रेसले सहयोगी भूमिका नखेलको भए संविधान जारी पनि हुने थिए । तर आजको अवस्थामा आईपुग्दा नेपाली कांग्रेसले ठीक त्यसको विपरित अवस्थामा छ । आजको मुख्य एमालेको प्रतिद्धन्दी कांग्रेस नै हो । माओवादी र कांग्रेस प्रतिक्रान्तिकारी शक्ति हुन । आजको क्रान्ति भनेको के हो भने संविधान संविधान जोगाउनु पर्ने हो । संविधान कार्यान्वयन को कुरा हो । फैसला गर्नुपर्ने के थियो भने छिमेकीसँगको सम्बन्ध र नीति हो । खासगरि भारतसँग पारस्परीक हितको आधारमा समान हैसियतको आधारमा सम्बन्ध हुन्छ की हुन्न ? भन्ने कुरा आजको क्रान्तिको मुख्य पक्ष हो ।
एमाले त्यसको वकालत गर्छ कांग्रेस र माओवादी त्यसमा मौन बस्न चाहान्छ । आज हामी हिमाल, पाहाड तराई, सबै जातजातीलाई मासन हैसियतमा लैजानुपर्छ भन्नेमा छौ तर एकल सह–अस्तित्वका आधारमा जानुपर्छ भन्नेहरुसँग कांग्रेस माओवादी लहसीदै छ भने त्यो कसरी क्रान्तिकारी ? अहिले राजनीतिका दलालहरु हावी छन् जबसम्म राजनीतिका विचौलियाहरु समाप्त हुँदैनन तबसम्म स्थायीत्व हुँदैन । ती दलाहरुलाई एमालेले चिनेको छ परास्थ गर्न अब जनताको साथ चाहिन्छ ।
स्थानीय आबश्यकता र चुनावको सुनिश्चिताका आधारमा तालमेल
अहिले माधव नेपाल र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले रत्नपार्कमा पेलेटीकसेको फोटो राखेर एमालेले राप्रपासँग तालमेल गकिन गरेको भनेर चर्चा गरिदैछ । त्यस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालाई त्यो तातो पिचमा एमालेले कसरी ल्यायो ? एमालेले कति पापड पेल्यो ? माले मसाले मण्डले एउटै भन्ने गिरिजाप्रसादसँग त्यति बेला एमालेले तालमेल किन गर्यो ? अहिले किन गरिरहेको छैन ? यसलाई बुझ्नु जरुरी छ । किनभने कांग्रेसले नीति, एजेण्डा मुद्दा सबै छाडीसक्यो । अब एमालेको मुख्य लडाई कांग्रेससँग नै हो । कमल थापा एजेण्डामा प्रष्ट छन् । उनले राजतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मका केही एजेण्डा प्रष्ट ढंगले अघि सारेका छन् । अरु मुद्दामा विमति छ तर राष्ट्रियतामा हामी नजिक छौ । जहाँ हामीविरुद्ध मोर्चाबन्दी हुन्छ, त्यहाँ हामीले तुलनात्मक रुपमा देशभक्त शक्तिसँग तालमेल गरेर जान्छौं ।
यस्तो कुरा दुनियाँमा जहाँ पनि हुन्छ, माओत्सेतुङले च्याङकाइसेकसँग तालमेल किन गरे ? अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्तरकोरियाका नेतासँग किन वार्ता गर्न खोज्दैछन् । आबश्यकताको सिद्धान्तले निर्धारण गर्न । हामी पनि स्थानीय आबश्यकता र चुनावको सुनिश्चतताका आधारमा सबै शक्तिसँग तालमेल गरेर जान्छौ । अब हिजोका कांग्रेसहरु राप्रपा र आजका कांग्रेसहरु एमालेमा आए हुन्छ । किनभने हिजो कांग्रेसले उठाउने एजेण्डा आज राप्रपाले बोकेको छ अनि समाजवादको एजेण्डामा एमाले अगाडी लम्कि रहेको छ । म आह्वान गर्छु कांग्रेसका नयाँ विचार बोक्नेहरु एमालेमा आऊ पुरा एजेण्डा बोक्नेहरु कमलथापा तिर जाऊ ।
कांग्रेसका कारण ४० युवा विदेशमा
आज ४० लाख युवाहरु विदेशमा छन् । ती मध्ये २५ लाख युवाहरु कांग्रेसका कारण विदेशमा छन् । जनकपुर काराखाना कसले बन्द गर्यो ? बाँसाबारी छाला जुत्ता, चिनी कारखाना, जुटमिल कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग, हेटौडा धागो उद्योग लगायतका दर्जनौ उद्योग धन्दा कसले सिध्यायो । हरेक कारखानामा एक हजार प्रत्यक्ष र एकलाख भन्दा बढी अप्रत्यक्ष रोजगारी थियो ।
उखु खेती गरेर हजारौले काम पाइरहेका थिए, सुर्तीको खेतीमा त्यत्तिकै आवद्ध थिए, गाउँ गाउँमा छाला जुत्ताका लागि छालाको कच्चा पदार्थको जोहो गर्दै थिए । ती सबै समाप्त भए । रोजगारी जति सबै समाप्त पार्ने अनि अहिले रोजगारीको ठूलो कुरा गर्ने ? सबै उद्योग, कारखाना कौडीको भाउमा बेचेर राखे अनि मान्छेहरु कहाँ जान्छन् । अहिलेको युगमा २ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय भएपनि केही मान्छे विदेश जान्छन् रोक्ना सकिदैन । तर २० देखि ३० लाख मान्छे कांग्रेसका कारण नै विदेशीएका हुन् । अध्यनले गरेपनि त्यही पुष्टि हुनेछ । अब कांग्रेसपार्टीको औचित्य यो मुलकमा छैन ।
एमाले सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराइले धुम्बाराहीमा बिहीबार प्रचार भेलमा ब्यक्त गरेको बिचारको सम्पादित अंश